Onionshare, yakasarudzika sarudzo yekugovana mafaira zvakachengeteka | Linux Vakapindwa muropa
Parizvino masaizi emafaira akakura kwazvo uye Internet kumhanya haimhanye, zvirinani kune vashandisi vasina fiber. Kugadzirisa izvi, vashandisi vazhinji vanoshandisa gore rakaomarara dhiraivha iyo inobvumidza kukwidzirisa kurodha pasi kwemafaira nekuti akaiswa kune server uye kwete kune wega komputa.
Mukati merudzi urwu rwekuda pane Tumira chirongwa cheMozilla zvinotitendera teerera mafaera mahombe kumaseva ako uye zviite zveruzhinji kuti chero munhu apinde. Kune mamwe mabasa seTransferwise ayo anopa zvakafanana, asi ikambani yakavanzika iri kuseri kwesoftware iyi.Sarudzo yechitatu ingave Onionhare. Onionhare chirongwa cheTOR Project uye basa rayo ndere kupa zvakafanana asi nenzira isingazivikanwe uye yakachengeteka, Kuchengeta huzivi hweprojekiti yako mukati me software iyi. OnionShare inotibvumidza kurodha mafaira akakura kana mafaera mapakeji kune chaiyo network yakachengetwa mukati mechikwata chedu uye kugona Export iyo kuburikidza isingazivikanwe chinongedzo. Nekushandisa tekinoroji yeiyo onion, chero munhu anopinda haazokwanisa kuwana michina yedu kuburikidza nechirongwa ichi kana kutora mapakeji atinoisa kana kuendesa.
Onionhare chishandiso chemahara chinonakidza kune avo vane hanya nezve kwavo zvakavanzika. Tinogona kuisa chirongwa ichi mune chero kupi kugoverwa, kune izvi isu tinongofanira kuenda wiki Onionshare uye uteedzere matanho ekumisikidza. Kana tangoisa, mashandiro ayo ari nyore. Isu tinozviita uye inotevera skrini ichaonekwa:
Mariri tinoisa mafaera atinoda kuendesa kana kutsikisa. Mushure mekuisa uye kugadzirisa mafaira, Onionhare inotumira chinongedzo chatinogona kutumira kana kupfuudza kune vatinosangana navo kuti tinoda kuti vagamuchire iyo data. Iyi link ichavhurwa kwemaawa mashoma kuitira kuti irege kuzova musuwo wakazaruka wechikwata chedu.
Onionhare sarudzo inonakidza uye yakachengeteka kwazvo. Kana iwe ukaona kuti zvakaoma kwazvo kuti timu yako iwane, imwe sarudzo ichave Send uye yako yekuwedzera-ye firefox. Kunyangwe pachezvako Ndinokurudzira kushandisa Onionshare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Onionshare, yakasarudzika sarudzo yekugovana mafaira zvakachengeteka